यी हुन एसपीभन्दा पावरफुल इन्सपेक्टर ,गुमराहमा राखेर असुली धन्दा | Online Nepal
यी हुन एसपीभन्दा पावरफुल इन्सपेक्टर ,गुमराहमा राखेर असुली धन्दा
मंगलबार, १३ पुष २०७८
रुपन्देही । नेपाल प्रहरीका एक इन्सपेक्टरले एसपीलाई समेत गुमराहमा राखेर असुली धन्दा चलाएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत इन्सपेक्टर भाष्कर चन्दले एसपी मनोज केसीलाई समेत थाहा नदिई जिल्लामा सेटिङ चलाएका छन् ।
उनले जिल्लाभित्रका विभिन्न प्रहरी चौकीहरूमा आफूनिकटका इन्चार्ज खटाएर असुलीधन्दा चलाइरहेका छन् । प्रहरी निरीक्षक चन्द जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रशासन फाँट हेर्छन् । कुन प्रहरीलाई कहाँ पठाउने र कसलाई इन्चार्ज दिने भन्नेमा प्रशासन फाँटको ठूलो हात रहन्छ ।
चन्द सुदूरपश्चिमका हुन् । उनले सई तथा असईलाई चौकीमा इन्चार्ज खटाउँदा सुदूरपश्चिमकालाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । २०७७ चैतमा रुपन्देही आएका चन्दले त्यसयता तल्ला तहका प्रहरीको मनोबल गिर्ने काम गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एक सईले जानकारी दिए ।
मैनहिया, बगाहा, पिप्रहवा बढी मात्रामा भारतबाट नेपालतर्फ सामान तस्करी हुने क्षेत्र हुन् । यस्तै, प्रहरी निरीक्षक चन्दले मर्चवार, लुम्बिनी क्षेत्रबाट पनि मासिक रकम बुझ्ने गरेका छन् । रुपन्देहीका एसपी मनोज केसीले तस्करी शुन्यमा झार्ने अभियान चलाएका छन् । तर, मातहतका प्रहरी अधिकृत नै असुलीमा लागेपछि उनको अभियानमा ठेस लागेको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार एसपी केसीले तस्करीबाट अहिलेसम्म पैसा खाएका छैनन् । उनी प्रहरी खटाएर तस्करी रोक्न लागिपरेका छन् । तर, चन्दले भने आफू निकटका प्रहरी खटाएर असुली गरेका छन् । एसपी केसीलाई विभिन्न बहानामा रिझाएर चन्दले आफू निकटलाई राम्रा चौकीमा पठाउने गरेको जिल्लामा कार्यरत प्रहरीहरू बताउँछन् ।
प्रहरी निरीक्षक चन्दले यतिसम्म गरेका छन् कि, कुनै प्रहरीले आफूलाई समस्या प-यो, कुनै प्रहरी चौकीमा जान्छु भनेमा उल्टो कारबाही गरेर अन्त पठाउने गर्छन् । ‘उहाँमा म अधिकृत हुँ र मेरो चल्छ भन्ने मानसिकता छ’, एक प्रहरी हवल्दार भन्छन्, ‘हाम्रा पनि समस्या हुन्छन्, यस्तो ठाउँमा पठाउनुस् सर भन्ने हो भने उल्टै कारबाहीस्वरुप अर्का ठाउँमा पठाउनुहुन्छ ।’
जिल्लामा कार्यरत एक प्रहरी दशैं, तिहारमा घर बिदामा गएनन् । उनी क्रश्चियन धर्म मान्ने भएकाले क्रिसमसमा घर जाने भनेर दशैंतिहारमा घर गएका थिएनन् । तर, चन्दले क्रिसमसमा घरजानका लागि बिदा माग्दा ती प्रहरीलाई जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र मर्चवार पठाएका छन् ।
उनी रुपन्देहीमा आएदेखि नै निरन्तर तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीलाई दबाउने गरेका छन् । यस्तै, उनी मातहत रहेका यमबहादुर बिक (हवल्दार) ले आफूनिकटका सिपाहीहरूलाई राम्रो ठाउँमा पठाउन सिफारिस गर्ने र घरबिदा दिँदा पैसा खाने गरेको प्रहरी स्रोतले बतायो । –दृष्‍टि साप्ताहिकमा खबर छ
नेपाल प्रहरीमा एसपीसम्मले अनिवार्य अवकाश पाउँदा स्वतः एक तह बढुवा हुने
पाँच एसएसपीको सरुवा, सातको पदस्थापन
क्षमतावान कहलिएका एसएसपी थापा किन बने आँखाको तारो ?
एसएसपीहरुको सरुवा : काठमाडौंमा सुदीप गिरी, ललितपुरमा यज्ञबिनोद पोखरेल
काठमाडौंका एसएसपी सरुवा विवाद : प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच असमझदारी भएको हो ?
मन्त्री यादवलाई बर्खास्त गरी तत्काल गिरफ्तार गर्न युवा संघको माग
किन युक्रेनलाई धम्की दिइरहेछ रुसले ? ऊ नाटोबाट के चाहन्छ ?
सर्लाहीमा तातो रक्सीमा डुबेर बालकको मृत्यु, आमा घाइते
प्रचण्ड पत्नी सीतालाई कोरोना पुष्टि, आईसीयूमा उपचार जारी
टर्कीमा राष्ट्रपतिलाई अपमान गरेको आरोपमा पत्रकार पक्राउ
मोरङमा फिल्मी शैलीमा ३० वर्षीया महिलामाथि सामूहिक बलात्कार, अवस्था गम्भीर !
समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्दै राष्ट्र बैंक
ह्वात्तै बढ्यो कोरोना मृत्युदर, ओमिक्रोनका कारण बढेको चिकित्सकको संकेत
एसईई परीक्षा वैशाखमा, तयारीमा जुट्न विद्यार्थीलाई आग्रह